China AT01 Cinezela ngokulula iVape CBD / THC / Delta 8 I-Cartridge yeoyile ekhokele simahla kwaye akukho nsimbi inzima enencasa emsulwa kunye nomphunga omkhulu mveliso kunye nabenzi | IAlphagreen vape
I-AT01 Cinezela ngokuLula iVape ye-CBD / i-THC / i-Delta 8 yeCartridge yeoyile ekhokele simahla kwaye akukho sisitya sinzima esinencasa emsulwa kunye nomphunga omkhulu
Inkcazo emfutshane: Sinikezela nge-AT01 yeCofa ngokulula kwiVape ye-CBD / i-THC / i-Delta 8 yekhatriji yevape. Inencasa emsulwa kunye nomphunga omkhulu. Sineqela le-R & D elinobungcali kunye nokuthambisa kwangaphambili, emva kwenkonzo yetyuwa. Iimveliso zethu zinengxelo elungileyo kunye nomgangatho ophezulu. Ngumgaqo wokuba umgangatho bubomi. Ukukhangela phambili ukusebenzisana nawe.
Ixabiso FOB: I-US $ 0.78-0.88 / isiqwenga
Min.Order Ubungakanani: Amacandelo ali-100
Amandla okubonelela: Amacandelo ama-300,000 / iNyanga
Immimiselo yokuhlawula: T / T, PayPal, L / C, D / A, D / P.
Njengomvelisi wesixhobo se-vape e-China, sinayo ivenkile yokusebenza kakhulu ye-GMP. Sinikezela kungekuphela nje kwizinga eliphezulu leentlobo ezahlukeneyo zecartridge kodwa kunye neentlobo ezintsha ezilahlwayo vape pen. Sihlala siphuhlisa iimveliso ezintsha. Sinikezela ngenkonzo ye-OEM / i-ODM kubathengi bethu, unokuba ngomnye wabo njengomthengi welebheli emhlophe. Ngaphezu, inkonzo yabathengi ezi-5-Stars kukukhula kwenjini yethu ye-CBD ye-vape kwixesha elide. NgaphandleiCartridge kwaye ipeni yevape, nathi ukubonelela vape izixhobo kwaye Iiphakheji ezenziwe ngokwezifiso.
1. Ukuveliswa kweMveliso ye I-AT01 CBD / THC Vape Cartridge
Ukucinezelwa ngokulula kwe-AT01 kukwimo efanayo necartridge yethu yoqobo AT01, kodwa kukuphucula enye xa kuthelekiswa ne-AT01. Kungenxa yokuba inethiphu eyahlukileyo-yeCape Press Cap elula. Iikhatriji ze-AT01 zine-cap twist kwaye kukho imfuneko yokusebenza okulungisiweyo yokuvala incam. I-AT01 iCartridge yeCofa ngokuLula ikwiphepha lokushicilela, ke gcina umsebenzi kunye nexesha. Kukulungele ngakumbi kwaye kulula.
Ingcebiso iyabonakala okanye ingwevu ngokungagqibekanga, kodwa eminye imibala inokwenziwa njenge-MOQ ye-3,000. Sikwakuxhasa ukuprinta kwelogo kunye noyilo lokupakisha.
Okubaluleke ngakumbi, i-cartridge ye-AT01 elula yokuhambisa inezinga lokuvuza elingaphantsi. Icofa ngokulula kodwa ayikwazi ukuvula kwakhona. Ke ngoko, awuzikhathazi ngokuvuza kunye nokumosha ioyile yakho.
2. Ipharamitha yeMveliso (Ukucaciswa) kwefayile ye- I-AT01 CBD / THC Vape Cartridge
I-CBD / i-THC ivape cartridge / I-Easy Press ye-AT01
Isinyithi / iglasi yePyrex / Ikhoyili yeCeramic
D 10.5mm kunye neL 42.3 / 51.8mm
Umngxunya wokutya ioyile
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm, ubungakanani ngokwezifiso）
3. Uphawu Product kunye nokusetyenziswa I-AT01 CBD / THC Vape Cartridge
—Incam yokuCofa ngokulula, cinezela ngesandla endaweni yomatshini.
—— Akukho Heavy Metal, uhlobo olungena lead.
—Ilungele iintlobo ezahlukeneyo zeoyile ye-CBD / THC.
—Alukho Uyilo oluNqabileyo.
—— Ifomula yodongwe ekhethekileyo
-— Inkxaso yeOEM / IiNkonzo ze-ODM
4. Iinkcukacha ngeProduct I-AT01 CBD / THC Vape Cartridge
Ingcebiso yeglasi epheleleyo, akukho plastiki. Gcina amehlo akho kwimpilo yakho
Cinezela kuhlobo, kuba akukho uyilo luvuzayo.
Akukho sithuba sentsimbi inzima (Ukuba ufuna ukwazi iingozi zesinyithi esinzima, nceda ufunde inqaku elingezantsi), ingcebiso eyahlukileyo yokukhetha.
Ireyithi yokufunxa yeoyile ephezulu, ifanele ioyile enobukhulu eyahlukileyo.
Printing Ukuprinta ilogo yesiqhelo kunye nombala wengcebiso eyahlukileyo, yenza uphawu lwakho.
Zithini iingozi zesinyithi esinzima ebantwini?
Lumkela izinyithi ezinzima ezinokubangela umhlaza
Ezindabeni, sihlala sibona ukuba isinyithi esinzima sinokubangela ingozi emzimbeni womntu, ngakumbi ungcoliseko lwesinyithi esinzima okusingqongileyo, esinokuthi sigulise abantu kwaye sibangele nomhlaza. Kwaye isinyithi esinzima sikho kuyo yonke indawo ebomini, hayi nje ungcoliseko lokusingqongileyo, nkqu nezithambiso ezisetyenziswa ngabahlobo ababhinqileyo ziqulathe izinyithi ezinzima. Kuyacingeleka ukuba ingozi yayo emzimbeni womntu ifihlakele kakhulu, akukho lula ukuyifumanisa, kwaye kukho iintlobo ezininzi zesinyithi esinzima, kwaye ukwenzakala kweentlobo ezahlukeneyo zesinyithi esinzima emzimbeni womntu kwahlukile. Emva koko masihambe kunye nawo wonke umntu ukuze sibone ukuba zeziphi iingozi zesinyithi esinzima
Khokela, ilothe yenye yezona zinto zinetyhefu enzima enetyhefu. Nje ukuba ingene emzimbeni womntu, iya konakalisa ngokuthe ngqo iiseli zengqondo yomntu, ibangele ukudodobala kwengqondo, ibangele ukufa kwengqondo kunye nokugula kwengqondo kubantu abadala, kwaye ibeke umngcipheko kumhlaza. .
Imercury, Ukutya imekyuri kungena ngokuthe ngqo esibindini, kuze emva koko konakalise umbono weengqondo kunye nemithambo-luvo. Amanzi aqulethe imilinganiselo ye-mercury. Ukuba ithatha indawo yamanzi ane-mercury ixesha elide, iya kubangela ityhefu engapheliyo.
Chromium, okona kulimaza ngqo kukubangela ukuphazamiseka kwengqondo kunye nokuba ndindisholo kwemilenze.
IArsenic, Esi sinyithi sinzima kunokubangela ulusu lube nombala kunye neeratinization engaqhelekanga.
IAldehyde kunokubangela ukungasebenzi kakuhle kwezintso kunye nentliziyo kunye nezifo ze-cerebrovascular. Eyona ngozi ibalulekileyo luxinzelelo lwegazi oluphezulu.
ICobalt kunokubangela umonakalo oqhumayo eluswini.
IVanadium, eneempembelelo ezithile kwintliziyo yomntu kunye nemiphunga, kunokubangela ukungasebenzi kakuhle kweplasma metabolism.
ImvanoNjenge-cobalt, inomonakalo oqhumayo kwisikhumba.
Selenium, abantu abatyebe kakhulu nge-selenium banesifo esothusayo.
Thallium kunokubangela i-neuropathy emininzi.
Manganese inokuchaphazela umsebenzi we-thyroid, kwaye kulula ukufumana i-hyperthyroidism.
Tin, njengelothe, inetyhefu kakhulu kwaye inokubangela umhlaza.
Ndiyakholelwa ekubeni wonke umntu unokuqonda okuthile malunga neengozi zesinyithi ezininzi. Izinyithi ezinzima ziyingozi emzimbeni womntu. Owona monakalo mkhulu kukuba zinokubangela umhlaza kwaye zibeke emngciphekweni ubomi ngqo. Ke ngoko, kufuneka sibangele ungcoliseko olubonakalayo ebomini bethu, ngakumbi ungcoliseko lwentsimbi enzima kokusingqongileyo, enokubangela ukuba ezi zinto zinzima zingene emhlabeni nasemanzini. Xa abantu bedibana nala manzi angcolisekileyo kunye nomhlaba, oko kuya kubangela ityhefu engapheliyo, eya kuthi ikhokelele kwiingxaki ezithile emzimbeni. Izifo zisongela ubomi.
Egqithileyo I-AIR Button yovulo oluVulekileyo lweBhetri yePalm nge-510 Thread, efanelekileyo kwi-Universal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Okulandelayo: I-AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 iCartridge, akukho Heavy Metal Lead Simahla kunye noVavanyo olusulungekileyo kunye neVapor enkulu
iCBD vape iCartridge
yodongwe cbd iCartridge
engenanto vape iCartridge
Igobolondo yeoyile ye-cbd egcwalisekayo
ezintsha, eziSebenzayo, kunye nokuFezekisa iimfuno zabaThengi.
Umnxeba:: +86 13559135783
Lwedilesi:5th Floor, No.3 Building, Ji An Tai Industrial Park, Tian Fu Road, Bao'an District, Shenzhen, China
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, 510 ibhetri, ipeni ibhetri vape, ezilahlwayo vape usiba, ipeni yevape egcwalisekayo, ipeni ye-cbd vape, CBD oyile vape ezilahlwayo, Zonke iiMveliso